Nagaasoo Gidaadaa: ABO'n galu malee nagaan hin bu'u - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dr. Nagaasoo Gidaadaan ABO'n galu malee nagaan hin bu'u jedhu
Lixa Oromiyaa keessatti nageenyi erga boora'ee bubbuleera. Bahaaf galma uummataa danqameefi rakkoo nageenyaa mudateef qaamolee nageenyaa mootummaa fi miseeensota WBO naannicha jiran gidduutti quba walitti qabuutu jira.
Pireezidantii Itoophiyaa duraanii boodas dhaaba isaanii, DHDUO, keessaa bahuun dhuunfaan dorgomuun miseensa Paarlaamaa kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa nageenya mirkaneessuuf ABO'n biyyatti galuu qabaa jedhan.
''Dhaabbileen siyaasa Oromoo adda addaa biyyatti galuun gaarii dha. Isaan duwwaan galuun hin gahuu alatti hafuun kan isarra hin jiraanne kan ABO jira'' kan jedhan Dr. Nagaasoon, ''inni yoo gale malee nagaan biyyatti keessatti hin b'uu'' jedhan.
Nageenyi jiraatee hojiin misoomaa akka hojjetamu yoo barbaachise dhaaabni siyaasaa kun biyyatti galuu qaba jedhan.
ABO'n galu malee nagaan hin bu'u sababa itti jedhanis ibsaniiru.
''ABO'n erga hundaa'ee waggaa dheeraa lakkoofsiseera. Kana qofa osoo hin taane biyya keessaa fi biyya alaatti deeggartoota, miseensotaa fi homaa waraanaa hedduu qaba.''
Kanaafis mootummaa fi ABO'n waliin taa'anii mariyachuun haala ABO'n itti deebi'uu mijaahuu qaba jedhan.
Marii araaraa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse fudhachuun mariif fedha qabaachuu kan beeksise, ABO'n mariin araaraa bakka qaamni walabaa sadaffaan jirutti akka raawwatu kan fedhu ta'uu ibsee ture.
''Qaamni sadaffaan gidduu saanii taa'uu qaba. Qamni kuni ammoo mootummoota biyya alaa osoo hin taane Oromoodhuma ta'uu qaba," jedhu.
Oromoo keessaa ammoo abbootii Gadaa, jaarsolii biyyaa, haawwan, qarree fi qeerroo keessaa kan filataman ta'uu qabu jedhu.
''Labsiin yeroo muddamaa furmaata bu'uraa hin ta'u''
Qaamoleen kun marii araaraa kana taa'anii hordofuufi taajjabuu qabuu akka yaada Dr. Nagaasootti.
Hojiin ABO biyyaatti deebisuu kun saffisaan raawwatamuu akka qabus amanu.
Marii ABO biyyatti deebisuuf taasifamu keessatti jaarsummaan qooda fudhachuuf yoo gaafataman gahee isaanii bahuuf ''yeroo hundumaa qophii'' ta'uus Dr. Nagaasoon himaniiru.
MM Abiy Ahimad wayita Ameerikaa daawwatanitti dhimma kanarratti gaafatamanii jilli marii ABO waliin taasifamuuf dhiyeenya gara Asmaraatti akka imalu dubbataniiru.